egbu egbu nwere ihe - Atụmatụ Echiche Tattoos
egbu egbu na ihe pụtara
Eji mara akparamagwa Japanese mara ọtụtụ ihe na nzube. Ụdị Japanese na-abịa n'ụdị dị iche iche. Ihe ndị na-anọchite anya igbu egbu bụ iji kọọ akụkọ dịka azụ azụ na dragọn. Dragọn ahụ jikọtara akụ na ụba, ike na ike. Mgbe ị hụrụ akwara ndị na-achọsi ike ma bụrụ ndị mara mma karịsịa, a manyere gị ịjụ ihe egbu ahụ pụtara. E nwere nanị ntanaka ole na ole na-eme ka ịchọọ ịkwụsị ma chọọ maka nkọwa ha. Otu n'ime tattoos dị otú ahụ bụ egbugbere ọnụ dragọn ahụ nke na-abịa na ọdịiche na ụdị. Ụzọ egbu egbu na-adọrọ mmasị ga-eme ka ị ghọta n'eziokwu na ọ bụ ihe mara mma ma mara mma.
Pịa ebe a iji chọpụta echiche ndị ọhụrụ tattoos nke Japan maka ndị nwoke na ndị inyom.
Egbugbere ọnụ na-ejikarị ndị inyom ekwu okwu banyere ọrụ na-emetụ n'obi. Enwere ike ese ya na agba dị iche iche, agụụ ma ọ bụ ụkpụrụ. A na-eji egbugbere ọnụ uhie mee ihe maka ikwu okwu banyere ịchutu ọnụ na inwe mmekọahụ mgbe ọ na-abanye n'ime ebe dịka afo, hips, olu, wdg. Nke a nwere ike na-ese ya n'ọtụtụ akụkụ ahụ nke ga-ahapụ nsusu ọnụ. A na-eji egbugbere ọnụ na-acha uhie uhie na-asụ ire nwere ike jikọrọ ya na anwansi. A na-eji egbugbere ọnụ uhie mee ihe iji kwurịta okwu agbarịta ụka. Na-ekwukwa banyere akụrụngwa asọpụrụ nke ị ga - akpakọrịta.
Pịa ebe a maka ịlele ederede ọhụrụ egbugbere ọnụ maka echiche nwoke na nwanyị.
Ụdị ihe akara oyi na-acha na-egbuke egbuke
Ogbugbu nwere ike ịdị obere ma ihe ọ pụtara bụ ihe buru ibu. Ọnwụ ahụ na-adọrọ mmasị dị ukwuu ma jiri ya mee ihe na-egosi na ahụ riri ahụ, ịda mbà n'obi, mmerụ onwe ya, igbu onwe ya na ọchịchọ nke ịga n'ihu na ndụ. Ihe omuma nke semicolon banyere ihe ndu bu, ime ka madu kwenye na njedebe abiaghi. Taa, semicolon aghọwo akara egbugbu ndị na-agbasi mbọ ike ibi ndụ na-echetara onwe ha na ha nwere ihe ha ga-ebi. E nwere ụdị nnu a dị iche iche na ị ga-ekpebi otu ị chọrọ ka semicolon gị dị ka. Ná ngwụsị nke ụbọchị ahụ, semicolon na-anọchi anya ihe ka ibu na ihe bara uru na ị nwere ike ịghọta.
Ndị ahụ a hoputara nwere ike ink agbu a iji gwa ha ihe ha ruru. Ọnwụ ahụ bụ kpochapụwo ma nwee ike ịme ndị mmadụ ka ha soro nrọ gị. Ị nwere ike inweta mmụọ nsọ dị gị mkpa mgbe ị na-edepụta akara ndị a n'ahụ gị. Ọ na-ewe banyere ọbụbụeze nke onye na-arịọ ya. Ọ na-achọ banyere njide onwe onye na ikwu okwu banyere emeghe nke onye na-egbu egbu.
Pịa ebe a maka ịlele ọkpụkpụ mkpịsị ugodi nke ọhụrụ na-eche echiche maka ndị ikom na ndị inyom.
A na-eji ihe nchịkọta a na ọtụtụ tattoos na-anọchite anya ọtụtụ ihe ọ bụ ezie na ha dị obere na akụkụ ọ bụla nke ahụ.
Pịa ebe a iji chọpụta echiche nchịkọta ọhụrụ nke obere mkpado maka ndị ikom na ndị inyom.
Ụdị mmụọ ozi pụtara
Angel egbugbu abụghị ihe ijuanya n'ihi nkọwa dị ebube ọ na-abịa. Ị ga-ahụrịrị akụkụ nke dara ada nke nwere ihe ọ pụtara. N'agbanyeghị otú mmụọ ozi ahụ si abịakwute gị, ọ ka na-enye gị ihe pụrụ iche. Ogbugbu nke mmụọ ozi anaghị eguzo maka ihe ọjọọ. Ha na-ekwu banyere iguzogide ihe ịma aka ma ọ bụ na-agabiga nsogbu na ndụ. Ndị a bụ ụfọdụ n'ime nkọwa ndị na-abịakwute mmụọ ozi.
Ha nwere ike inwe ihe jikọrọ ọnọdụ ime mmụọ, olileanya, Iso Ụzọ Kraịst, nchebe, nchebe, okwukwe, onye nlekọta, ike, nnwere onwe, mmụọ nweere onwe ya, ịdị ọcha, ịdị jụụ, onye dị elu, ịdị jụụ, ihe ọma ọ bụla, obi ike, obi ike, iguzosi ike n'ihe, ịhụnanya, nnwere onwe , ùgwù na ịdị ọcha
Ihe ndị mmụọ ozi pụtara pụkwara ịgbanwe n'otù onye na-ahụ maka ya si eji ya eme ihe. Ịdị nwayọọ na ịdị jụụ nwere ike ịnọchite anya ndị mmụọ ozi na ụmụ nwanyị mgbe ndị ikom ahụ nwere ike ịhazi mmụọ ozi n'ụzọ ha chọrọ. Na nku, ndị mmụọ ozi na-apụta maka ihe dị iche. Enwere ike itinye mmụọ ozi na akara ọ bụla iji mee ka ọ nwee ihe pụrụ iche. Mgbe ị na-aga maka egbugbere ọnụ mmụọ ozi gị, ọ dị oké mkpa na ị nwere echiche ziri ezi ịtụgharị mmụọ ozi gị na ihe ịchọrọ ka ọ pụta.
Pịa ebe a maka ilele anya nke mmụọ ozi ndị mmụọ ozi ọhụrụ maka echiche nwoke na nwanyị.
Ụdị tatọ na-anọchite anya ike na nkwụsi ike. Ị hụrụ arịlịka akara n'oge gara aga? Nke a malitere ọtụtụ afọ gara aga site n'aka ndị Sumerian. Ọnwụ ahụ aghọwo otu n'ime nkwekọ kasị ochie n'ụwa ma Ndị Kraịst oge mbụ jikwa ya mee ihe. Nke a bụ mgbe a kpagburu ha n'ihi nkwenkwe ha. Ọ na-agụnye ọrụ ụgbọ mmiri n'ụgbọ mmiri dị ka ụgbọ mmiri, ike, nchekwa na nchekwa,
Pịa ebe a maka ịlele njirimara ihe nkwekọrịta ọhụrụ ọhụụ maka ndị ikom na ndị inyom.
Ụdị Ụdị Arrow
A na-akpọ ụda dị ka ihe nnọchianya nke Native America ma ghọọ otu n'ime ihe ndị na-ekwu maka igbu egbu. Mgbe akụ a gafere, ọ na-ekwu banyere ọbụbụenyi na mgbe enwere ikere ya dị ka ike mgbe ọ na-akwado. Mgbe akụ na-aga site na diamond, a maara ya dịka obi ike mgbe a na-akpọ akụ a na-ahụ maka nchekwa na nchekwa.
Mgbe a na-adọta ya site na akara diamond, ọ nwere ike ịnọchite anya obi ike dị ka onye na-aga n'ihu. "Ha na-ekwukwa, Otu akụ na-anọchite anya nchedo na nchedo pụọ na nsogbu. A pụkwara iji ya dị ka ihe nnọchianya nke ije ma ọ bụ ntụziaka. Ntu nwere ike ịdị jụụ ma nwee ike ịhazi ya dịka nkọwa nkọwa. Ụcha, ihe ederede na ụzọ ọ na-adọrọ mmasị bụ ihe na-eme ka egbuke egbuke otu n'ime ihe kachasị mma n'ahụ mmadụ. Site na egbu egbu akụ, nwoke ma ọ bụ nwanyị nwere ike ịmepụta ihe ndị mara mma iji lee anya chic. Ebube ise na-anọchi anya ike, ma otu akụ nwere ike ịkụda ngwa ngwa. Akwụ nke akụ na-esi ike imebi. A maara ube ka ọ bụrụ isi iyi nke ike nye ndị na-achọ ụzọ isi na-achịkwa egwu ha ma na-eguzo n'ìgwè.
Pịa ebe a maka ịlele nlele aghụghọ akara ngosi ọhụrụ maka ndị ikom na ndị inyom.
Ụdị egbu egbu egbu egbu
Agụmakwụkwọ na-ekwu banyere ime mmụọ na ịhụnanya. Ọ nwere ike ịkọwa uche na ịhụnanya, ọchịchọ na ịhụnanya. Nru ububa di nma ma mara mma nke bu ihe mere otutu ndi nwanyi choro ka ha tinye ya na aru ha. Ịdị mma na mpako ọ na-apụta mgbe ọ nabatara dị ịtụnanya. Ọ bụ ọrụ nke onye na-eme ihe iji kpebie ebe a ga-etinye egbu.
Ụdị nru ububa dị mma ma dị ịtụnanya. A maara nru ububa ahụ ka ọ gbanwee tupu ya enwee ike ịma mma. N'ihi ya, a na-ejikọta ọtụtụ nkọwa dịka butterflies dị ka mbilite n'ọnwụ na nmalite. Ndị Kraịst na-ewere nru ububa dịka nbilite n'ọnwụ Jisọs Kraịst na nrịgo ya rịgoro n'eluigwe.
Utu egbu egbu na-aputa ima, mbilite n'onwu na nmutaghachi, ime mmuo na mkpuru obi, ngbanwe, ime mmuo na nkpuru obi, amara na ima. E nwere nanị ntanaka ole na ole na-eme ka ịchọọ ịkwụsị ma chọọ maka nkọwa ha. Otu n'ime tattoos dị otú ahụ bụ egbu egbu ntu na-abịa na ọdịiche na ụdị. Ọzọkwa, Celtic Butterfly Tattoos bụ ihe atụ nke Ime Mmụọ na Omume. E nwere ọnyá araba na-egbu egbu nke na-ekwu banyere ya na-egosikwa Olileanya na Rebirth nye ndị lanarịrị.
Pịa ebe a maka ịlele nchịkọta ntule ntanetị ọhụrụ na-ewu ewu maka ndị ikom na ndị inyom.
Okpokoro osisi okooko osisi nwere ike na-anọchite anya fragility nke ndụ ma na-ekwukwa banyere ịma mma. Ndị inyom hụrụ ya n'anya n'ihi na ọ na-ekwu ọtụtụ ihe banyere ha. Ọ bụ mmụọ nsọ nye ndị inyom na-achọ ụzọ isi kọọrọ ha akụkọ ha n'ụwa. Mgbe ị na-ahọrọ ụdị ọkpụkpụ cherry, ị na-ekwu banyere ịhụnanya furu efu maka ụfọdụ ndị ga-abụrịrị ndị mmadụ nwụnahụrụ. Ọ na-abịa n'ụdị dị iche iche na ụdị ihe dị iche iche dịka omenala si dị. Ọtụtụ ndị hụrụ egbugbu nwere ike iji ya kwupụta ọtụtụ ihe.
Taa, ọbụna ndị ikom na-etinye ụdị egbugbere ọnụ nke ụdị cherry a iji gosipụta otú ha ga-esi bụrụ ihe ọma ma a bịa n'ịhụ ndị mmekọ ibe ha n'anya. Ha na ndị enyi ha na-ekwurịta okwu ka ọ na-ekwu okwu banyere Luck, Love, Impermanence, Clean, Beauty, Fragility, Strength, Nobility, Renewal, Transition and Prosperity. Ufodu ahu bu kwa ihe ohuru nke anahu na oge opupu ihe ubi. Dị ka ụda mmiri nke oge opupu ihe ubi, ifuru okooko osisi bụ ihe atụ nke ezigbo owuwe ihe ubi, nchebe nke ihe ọkụkụ na nlọghachi azụ nke ndụ mgbe obi siri ike. Ihe nnọchianya ahụ bụ ihe ọzọ na-eme ka egbu egbu bụ otu ọkacha mmasị nke ndị mmadụ karịa ụmụ nwanyị.
Pịa ebe a maka ịlele udara udara udara ọhụrụ cherry tattoo design for men and women.
Otu n'ime ihe ndị mere ndị mmadụ ji egbu egbu bụ n'ihi ihe ọ na-anọchi anya ya. Egwuregwu a na-egbu egbu nwere ụdị dị iche iche ma ndị nọ n'elu mmiri, ọ bara ezigbo uru. Ọ pụtara akara nke ọdịmma, nchebe na nkwado. Ọnwụ ahụ na-abịa n'ọtụtụ ọdịiche na ụdị. E nwere ụdị mpempe akwụkwọ ndị a nke nwere nkọwa dị ukwuu nye onye wearer. Iso nrọ n 'uzo bu uzo ogbugbu gi. Ị gaghị aga ebe dị anya iji mee ka ndị ọzọ mara ọkwa gị. Na egbu a, ọ dịịrị gị mfe ịkọrọ ụwa akụkọ gị n'enweghị ụda.
Ịbịaru akụkụ ọ bụla nke igbu ahụ na-agwa gị ihe mere i ji tinye egbugbu na nke mbụ. Ọ na-adabere na nduzi na ntụziaka, na-egosi ihe ọma. Nke a bụ ihe mere a pụrụ ịhụ ọtụtụ ihe oyiyi nke compasses n'ụgbọ mmiri. Ihe a ma ama banyere igbu egbu bụ ihe ị ga-enwe mmasị mgbe ị hụrụ nke ọ bụla. Ụbọchị ndị a, ọ bụghịzi ndị ikom na-eji ya eme ihe kamakwa ụmụ nwanyị na-achọ ka ejiji.
Pịa ebe a maka ịlele echiche nhazi imepụta ihe ngosi ọhụrụ nke mkpara maka ndị ikom na ndị inyom.
Ụdị dragọn pụtara
Kedu ihe egbu a pụtara? Ọtụtụ ndị nwere ihe dị iche iche maka egbugbere ọnụ dragọn ahụ. Otú ọ dị, akara ngosi igbu egbu nwere ike ịpụta ozi ọma, ọdịda, nchekwa na ọganihu. E nwere ihe ndị ọzọ dị ka anwansi, ọgụgụ isi, agha, anyaukwu, ike, ọmụmụ, duality, amamihe, ike, ferocity, ọnọdụ ime mmụọ, obi ụtọ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
E nwere nanị ntanaka ole na ole na-eme ka ịchọọ ịkwụsị ma chọọ maka nkọwa ha. Otu n'ime tattoos dị otú ahụ bụ egbugbere ọnụ dragọn ahụ nke na - abịa n'ụdị dịgasị iche iche na ejiji .Nke okwu dragọn pụtara n'ọdịdị dị iche iche ka ọ na - etinye ya n'ahụ. Ụfọdụ ndị mmadụ na-agbakwụnyekwa agba ka egbugbere ọnụ ha na-egbu egbu iji mee ka ọ bụrụ ihe dị iche na nke a na-ahazi ha. A pụrụ itinye egbu a n'akụkụ ọ bụla nke ahụ ma ọ ka ga-akọ akụkọ ahụ na ọ chọrọ ime. Ihe igbu egbu na ihe pụtara pụtara bụ ihe na-adọta ọtụtụ ndị nwere mmasị na ya.
Ọ bụkwa ihe atụ nke ike na amamihe. Ụfọdụ ndị na-ewere ya dị ka anyaukwu na omenala ọjọọ. Ndị Chinese na-ewere dragọn ahụ dị ka amamihe, ọdịmma, na ihu ọma. Nye ndị si na Japan, ha chere na dragọn ahụ bụ nguzozi. The dragon nke Celtic nke na-adọrọkarị na okpueze na ocheeze na-anọchite anya ike na ike.
Pịa ebe a maka ịlele akara ngosi dragọn ọhụrụ nke ọhụrụ maka ndị ikom na ndị inyom.
Ihe eji egbu egbu na-enwe mmetụta dịgasị iche nye ndị dị iche iche. Elephant nwere ike ịpụta udo, ike na ike. Ọ bụ ihe atụ nye ndị na-achọ nkwurịta okwu, amamihe, ọdịda na ihe ịga nke ọma. Ụfọdụ ndị na-ewere ya dịka ọmụmụ mgbe ndị ọzọ na-ewere ya dị ka ntinye, nlebara anya, ndidi na ịdị ọcha.
A na-atụle enyí na ígwé ojii na ọganihu, ọhụụ, obi ụtọ, ncheta, mkpebi siri ike na ọhụhụ. Egwu elephant na-abịa n'ụdị dị iche iche. Otú ọ dị, ọ bụ ọrụ nke onye na-achọ ịchọta ebe a ga-etinye egbu. Onye ọ bụla hụrụ ude a n'anya nwere mmasị n'ihe ọ pụtara, ọ ga-agwakwa gị ebe ha na-egbu egbu na ebe ha nabatara. Enyí na-anọchi anya Prosperity, Memory, ?? Obi ụtọ, ?? Nobility, ?? Nchọpụta, Enweghị ike na ọmịiko.
Pịa ebe a iji chọpụta echiche nsị nke elephant ọhụrụ maka echiche nwoke na nwanyị.
Pịa ebe a iji chọpụta echiche nkọcha ejiji maka oke ejiji maka umu nwoke na nwanyi.
Ọnụ ọdụm ọdụm na-adịkarị mma n'anya ya na okwu banyere mpako, obi ike, eze na ume. E nwere ihe dị iche dịka omenala. Ọdụm pụkwara ịpụta ịdị ọcha, ike, obi ike, obi ike, iguzosi ike n'ihe, ikike, nchedo, ime ihe n'eziokwu, ike, iguzosi ike n'ezi ihe na ikike. Ihe eji akpa egbu egbu bu ihe di mkpa nke mere otutu mmadu choro ichota ihe ha choro. Ọdịdị ahụ dị mma ma nwee ike ikpuchi ihe ọ bụla nke anụ ahụ ọbụna akụkụ kacha nta dị ka mkpịsị aka.
Echiche ndị na-ekwu banyere ọdụm bụ ihe mere ha ji bụrụ otu n'ime akara kachasị mma ka a gabata. Ọdụm abụọ e gosipụtara n'azụ na-agwa anyị banyere ọdịda anyanwụ na ọdịda anyanwụ ma ọ bụ ọbụna East na-abịa izute West. Ọdụm nwere ike ikwu okwu banyere nduzi ma nwee ike ịhụ ya na ebe nsọ ma ọ bụ nke a na-asọpụrụ gburugburu ụwa.
Pịa ebe a maka ịlele ọdụm ọdụm ọdụ ọhụrụ ọdụm maka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị.
Ogbugbu Lotus pụtara
Ogbugbu Lotus nwere ike idi mgbagwoju anya na ihe di iche iche eji egbu egbu ha emeela ka ha maa jijiji. Ụdị egbu egbu bụ ihe na-enye mmetụta dị iche iche nke lotus. Whiteus na-ekwu banyere uche na ime mmụọ. Ọ na-ekwu banyere izu okè na ịdị ọcha kwa.
Ihe lotus na-acha anụnụ anụnụ na-anọchite anya njikwa nke ime mmụọ n'ụzọ anụ ahụ. Ọ na-anọchite anya amamihe, ọgụgụ isi na ihe ọmụma. Ihe lotus purple na-anọchite anya echiche siri ike banyere okpukpe. Mkparịta ụka lotus nke pink banyere Buddha ka otutu lotus na-ekwu banyere obi, ọmịiko na agụụ gụnyere ịhụnanya.
Enwere ụdị ọnya dị iche iche ị nwere ike iji gbanwee ụzọ ị dị. Were dịka ọmụmaatụ, nku ndị na-abịa n'ụdị dị iche iche na nha. Enweghị akụkụ nke ahụ na ọ gaghị adaba na. Gịnị ka igbu egbu egbu pụtara? Ọtụtụ ndị nwere ihe dị iche maka ya. Ogbugbu Lotus bụ ihe nnọchiteanya nke bụ ihe mere ndị mmadụ ji agakwuru ha karịsịa ndị okpukpe na-ahụ ọtụtụ ihe ọ pụtara na-egbu egbugbu a. Ọ nwere ike ịdọta azụ na koi iji mee ka ọ nwee ihe ọzọ dị ịtụnanya nke ịhụnanya, ihe ịga nke ọma, ọdịmma, ike iguzogide ihe mgbochi nakwa ihe ize ndụ.
Pịa ebe a iji chọpụta echiche ntinye nke tattoos kachasị ọhụrụ maka ndị ikom na ndị inyom.
Ogbugbu egbu egbu nwere ike ịpụta echiche nke nnwere onwe n'ihi na ọ na-ejikọta ya na nnụnụ. A na-ewere nnụnụ dịka ụmụ anụmanụ na-enweghị onwe ha, ọ bụkwa ya mere ha ji esi n'otu akụkụ ụwa gaa efegharị. Otu ma ọ bụ ọbụna feathers nwere ike ikwu banyere ịchọ nnwere onwe. Ọzọkwa, nku na-ekwukwa banyere mmewere nke ije, echiche, ikike imekọrịta na ọgụgụ isi. Umu anumanu nwere ike ichochite anya ndi nwuru anwu, ihe jikotara ndi nwuru anwu.
Ihe nkedo umu anu bu uzo kachasi nma nke i huru. Ọ bụ obere na pụrụ iche. Ọ bụghị mmadụ niile ka ị na-ahụ ọnyà ndị a. Mgbe ị na-achọ nyocha igbu egbu iji chọọ nnwere onwe gị, egbu a bụ nanị otu ị ga-aga maka n'ihi ịma mma na mkpa. Ha na-anọchite anya onyinye si na mbara igwe daa. Ulo di iche iche na-aputa Freedom, Eziokwu, N'ihe oma, Uzo, Ngogo, Ulo, Elu elu, Nrọ, idi ocha, obi ike, nkwa, obi ike, olile anya, nkwurita okwu na nke ozo, njem nke mkpuru obi, njem, ime anwansi, A na-eji nlezianya kee atụmatụ iji nye gị ụdị njirimara ị chọrọ. Enwere ụdị ọnya dị iche iche ị nwere ike iji gbanwee ụzọ ị dị.
Pịa ebe a maka ịlele echiche ntanetịcha echiche ọhụrụ nke ụmụ nwoke na ndị inyom.
Owl na-anọchite anya olile anya na oge egwu ma ọ bụ ihe egwu. Echiche ikwesiri ike nke ikwiikwii n'abalị ahụ n'ihi ọhụụ dị ịtụnanya na-emetụta ndị mmadụ. O nwere ike ịpụta ihe akaebe na enwere ìhè na njedebe nke ọwara ahụ. Ihe igbu egbu nwere ike ịbụ ike, anwansi, nrọ, nghọta, nduzi, nghọta, amamihe, mmata na nchedo.
Ọ pụtakwara njikọ anwansi, ike na nrọ ndị ka mma. Ekwiwu nwere ike ịbata n'ọtụtụ ụzọ, ha ga-ejikwa ihe dị ukwuu pụta na ị ga-ahụ n'anya. Ogbugbu ikwiikwii ahụ nwere ike ịbụ ihe ncheta banyere onye nwụrụ anwụ nakwa na anyị niile kwesịrị ibi ndụ a n'ụzọ zuru ezu.
Echiche nke ikwiikwii nwekwara ihe ha pụtara dị ka egbugbere ọnụ ikwiikwii ọkụ bụ nke a na-akpọkarị owl na Mexico ma ọ bụ egbuke egbuke owl. Dịka ọmụmaatụ, ndị Mexico na-ahụ ụbọchị igbu egbu egbu n'ihi ọrụ ọ na-etinye. E nwere ụzọ dị iche iche na mmadụ pụrụ isi dọpụta nke a n'ahụ ka o mee ihe dị iche. Na njedebe nke ụbọchị, ọ bụ onye na-ahụ maka ya, onye nwere ike ịkọwa ihe egbugbu pụtara.
Pịa ebe a iji chọpụta echiche mkpocha ọhụrụ nke ikwiikwii maka ndị ikom na ndị inyom.
Ụdị Rose Tattoo pụtara
Rose na-egosi ịhụnanya. Ndị hụrụ n'anya nwere ike ịchọta ụdị egbu egbu. Mgbe rose adịghị na ogwu, ọ pụtara na ọ dịghị àjà a ga-eme mgbe ị hụrụ n'anya, mgbe ahụkwa, mgbe ogwu dị, ọ pụtara na achọrọ àjà. Egwu na-adịghị agwụ agwụ bụ ihe bilie nwekwara ike ịpụta ụfọdụ. Ụfọdụ ndị ọrụ ụgbọ mmiri na-ahọrọ egbu a n'ihi nzube pụrụ iche. A na-ejikọta ya na nke nwanyị nke na-akasị na-ezo aka n'ụmụ nwanyị pụrụ iche ndị a hapụrụ n'oge njem njem. Ọbụna ụfọdụ chi nwanyị na-ama egbu egbu a. A pụkwara iji Rose kwuo okwu banyere nhazi. Oge na-aga mgbe Roses bụ maka ụmụ nwanyị.
Taa, ọbụna ndị mmadụ na-ede egbu egbu a iji gosipụta otú ha ga-esi bụrụ ihe ọma ma a bịa n'ịhụ ndị mmekọ ibe ha n'anya. Ọ pụtara Ịhụnanya, Mbilite n'ọnwụ na Ịghaghachi, Ime Mmụọ na Mkpụrụ obi, Mgbanwe, Ime Mmụọ na Mkpụrụ obi, Grace na Ịlụ. Ịdị mma na mpako ọ na-apụta mgbe ọ nabatara dị ịtụnanya. Ọ bụ ọrụ nke onye na-eme ihe iji kpebie ebe a ga-etinye egbu. . Ọdịdị ahụ dị mma ma nwee ike ikpuchi ihe ọ bụla nke anụ ahụ ọbụna akụkụ kacha nta dị ka mkpịsị aka. Ogbugbu nke ebe a na-adabere n'otú onye nabatara ya si eche banyere ya.
Pịa ebe a iji chọpụta echiche ndị ọhụrụ gbasara akara ngosi maka ndị ikom na ndị inyom.
Ụdị mmadu na-anọchite anya ike ma ọ bụ obi ike iji merie nsogbu. Ihe agbụrụ pụtara sitere na omenala ma ọ bụ ebe ma ọ bụ ọbụna mpaghara. Ọ malitere na oge ochie mgbe ụfọdụ ndị na-enweta njirimara site na tattoos. A na-eji egbu egbu mmadu ekwu okwu banyere nkwenkwe ime mmụọ ma ọ bụ okpukpe. A na-eji ya dị ka mkpuchi ma ọ bụ maka nchekwa. A na-ejikwa ya na-akọ akụkọ na ọ nweghị onye ga-enwe ike ịkọ ma e wezụga ebo nke si na ya pụta. Ị gaghị aga ebe dị anya iji mee ka ndị ọzọ mara ọkwa gị. Na egbu a, ọ dịịrị gị mfe ịkọrọ ụwa akụkọ gị n'enweghị ụda.
Pịa ebe a maka ịlele nyocha echiche nke agbụrụ ndị agbụrụ ọhụrụ maka echiche nwoke na nwanyị.
A pụrụ iji egbugbu igbu egbu mee ihe iji kwurịta banyere ndị na-achọ nnwere onwe. Ọnwụ ahụ na-egosikwa ịhụnanya onwe onye na nkwanye ùgwù, ike na iguzosi ike n'ezi ihe. Wolf pụkwara ịpụta anụ ọhịa, ezinụlọ, ike, mmuo, nchedo, nnwere onwe, lanarị na ọtụtụ ndị ọzọ. . Na Siberian lore, a na-akpọ anụ ọhịa wolf iji chebe ụmụaka adịghị ọcha - a na-akpọkarị ya iji hụ na a mụrụ nwa. N'oge ochie Eurasia, anụ ọhịa wolf bụ onye na-echebe ihe nzuzo. O doro anya na ọ bụrụ na ị gwara anụ ọhịa wolf ihe nzuzo gị, ị ga-ewepụ ibu arọ nke ibu ya mgbe anụ ọhịa wolf ga-echebe ihe ọmụma ahụ ruo mgbe ebighị ebi.
Ndị na-aga maka nkịta ọhịa igbu egbu anaghị achịkwa ha n'ihi na ha kwenyere n'echiche. Ndị inye egwu a na-egbu egbu iji gosipụta ike ha nwere ike ịbụ. A kwenyere na anụ ọhịa wolf na-echebe ndị nwụrụ anwụ. Nke a bụ ihe mere ha na-ahụkarị na ili ma ọ bụ ili.
A na-ahụ tattoo igbu egbu n'akụkụ dị iche iche nke ụwa, ha na-anọchi anya ọtụtụ ihe. Mgbanwe nke tattoos ndị a bụ ihe na-eme ka ha bụrụ ihe pụrụ iche. Ha na-anọchite anya ya
Ike, Ike, Dominance, Royalty na Nobility, Danger na Mbibi, Ike, Nchedo na Nchebe, Passion na Mmekọahụ. Nke a bụ ihe mere ọtụtụ ndị ji eji ya.
Pịa ebe a maka ịlele nchịkọta anụ ọhịa wolf ọhụrụ wuru maka echiche nwoke na nwanyị.
na-egbu egbuudara okooko osisiaka mma akaegbu egbu egbuọnwa tattoosechiche egbugbuarịlịka arịlịkaokpueze okpuezena-adọ aka mmaegwu egwuakwara obiAnkle Tattoosegbu egbu ebighi ebiaka akaegbu egbu mmiriỤdị ekpomkpan'olu oluegbu egbu okpuegbu egbu diamondegbugbu maka ụmụ agbọghọnnụnụegbugbu egbugbuenyi kacha mma enyiụkwụ akaima ima mmaọdụm ọdụmenyí egbu egbuUche obizodiac akara akarandị mmụọ oziGeometric Tattoosakara ntụpọkoi ika tattooegbu egbudi na nwunyeakpị akpịụmụnne mgbuNtuba ntughariegbu egbu maka ụmụ nwokeegbu egbu hennarip tattoosmehndi imewengwusi pusiagbụrụ eboazụ azụEgwu ugoaka akandị na-egbuke egbukemma tattoosegbu egbu osisi lotus